banyere chi ọbụbọ – Dawn Clinic
Enye ndị ahụ na underserved, -Akpali ga-eme n'ọdịnihu ahụike isi, Ịgbanwe Aurora ike.
Anyị na-enye ndidi kpọt elekọta izute mkpa nke iche iche underserved bi Aurora.
Anyị imekota na obodo mmekọ imeri socioeconomic na omenala ndị na-egbochi ọrịa ahụ ike na Wellness.
Anyị ịzụlite ahuhu maka underserved ahụike site interprofessional imekọ ihe ọnụ.
Anyị azụlite n'ọdịnihu na enye na-ndú na-akwado echiche maka mgbanwe bụ isi na-elekọta.
Dawn bụ interdisciplinary nwa akwụkwọ na-agba ọsọ free ọgwụ ndị ọ ga-uninsured ọrịa si Aurora obodo. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ndị abụọ-n'ogige atụrụ: inye ndị kasị mma nlekọta ahụike na o kwere omume agbata obi anyị nọ na mkpa, na-enye ohere maka University of Colorado ụmụ akwụkwọ na-imekota na na amụta ihe n'aka ibe-eje ozi na obodo ndị gbara ha gburugburu na Anschutz Medical Campus. The ọgwụ e kere dị ka a na nkwonkwo ịmalite n'etiti Fields Foundation na Primary Care Progress.The ọgwụ ga-emeghe ka uninsured okenye ọrịa bi na Original Aurora na Tuesday mgbede si 5:30 ka 9:00 PM. Iji chọpụta ma ọ bụrụ na ị na-ruo eruo inweta ike hụrụ na chi ọbụbọ ọgwụ, biko hụ eligibility page.
Chi ọbụbọ ọgwụ emi odude ke 1445 Dayton St, Aurora, CO 80010. Biko hụ Clinic Awa na Location page maka nkọwa na ntụziaka.
-Amụba interdisciplinary-adakarị ọrụ mmụta n'etiti ọgwụ na ahụ ike, ahịa ọgwụ, akparamàgwà ahụ ike, ọgwụgwọ anụ ahụ, dibịa nnyemaaka, nwa ara na-, eze, na ahụ ike ọha ụmụ akwụkwọ n'isi ọkachamara ọzụzụ.
Ekpughe ụmụ akwụkwọ na-ọhụrụ, ọgwụ na ahụ ike n'ụlọ-style omume gburugburu ebe obibi na ihe mgbaru ọsọ iji wusikwuo isi na-elekọta arụ ọrụ ego ọkọnọ izute ihe acutely ebili ina na anyị bi n'obodo ukwu na obodo.
Ezi nlekota mentorship n'etiti isi na-elekọta ngalaba na ahụ ike ọkachamara na ụmụ akwụkwọ kwupụta otu ihe mgbaru ọsọ.
-Enye a forum maka Aurora bi na Anschutz ụmụ akwụkwọ ịkọrọ ndụ ha na oha.
-Arụ ọrụ na obodo ndị dabeere na òtù ndị na enye napụta a ọtụtụ ihe dị mkpa okenye nlekọta ahụ ike na ohere mgbe n'ihi na Original Aurora bi.
Isonyere anyị ọrụ ibe gburugburu Anschutz campus iji nweta ihe ndị bụ isi ihe mgbaru ọsọ e depụtara UCH Community Health Mkpa Assessment 2013 mmejuputa iwu Plan.
Anyị na-ekpe na ịkwalite omenala nchebe n'etiti anyị na ndị òtù inye ndị kasị mma na-elekọta anyị ọrịa.
"Ka o kwere mee onye ọrịa, dị ka obere ka o kwere ka onye ọrịa"
Maka ozi ọzọ, Biko gaa Eme ọ dịghị nsogbu Project website na Mahadum nke Colorado.
The University of Colorado Anschutz Medical Campus na-emi odude ke esịt otu n'ime Colorado kasị aku na uba aka ma underserved mpaghara. Census atụmatụ e mere na-egosi ihe uninsured ọnụego elu nke 45% na agbata ozugbo n'akụkụ aka Anschutz Medical Campus. tupu 2013 e adị efu nchekwa-net isi na-elekọta clinics na 80010 koodu mpaghara.
The University of Colorado 2013 Community Health Mkpa Assessment (CHNA) -egosipụta Access Nlekọta, Mental Health, na Oké Ibu ka ime obodo chọrọ. The CHNA mmejuputa iwu Plan achọ ilebara ndị a mkpa site ewu obodo Partnership, rụọ obodo ikike, ma na-akwalite ọha iwu na mma ahụ ike na Wellness na Original Aurora. Ndị a nsọtụ, na University mere ka strides, -akwado MCPN na 2013 na n'isi 2014, -akwado Gbara Ọsọ Ndụ Wellness Center na Bridges Nlekọta Program. Mgbalị ndị a malitere iji melite ohere na-elekọta akpan akpan ọnụ ọgụgụ mmadụ bi na Medicaid insurance. Otú ọ dị, e ka idi ọtụtụ wezụga na nke oké ọnụ Care Act si n'otu n'otu iwu na uninsured okenye ka nwere ịrịba isi ike na ịnweta isi na-elekọta.
University of Colorado School of Medicine nnyocha e mere data na-egosi na n'elu 50% nke-atọ afọ ọgwụ ụmụ akwụkwọ naanị nwere mmasị ma isi na-elekọta, underserved na nkà mmụta ọgwụ, ma ọ bụ ma. -Amụrụ mmekota iji hazie anyị ọgwụ nyewo anyị nwee nzube kpughepụrụ nye onwe-kwuru ebe nke mmasị na nlekọta ahụ ike, enriched site na mpaghara mba ndị ọkachamara nlekọta ahụ ike ọhụrụ na ohere.
Maka ozi ọzọ biko kpọtụrụ Isi Care Ọganihu Colorado.
Ọ nọwo na-elekọta 10 afọ kemgbe Javad Marshall-Fields na ya ego Vivian Wolfe ndị n'ụzọ dị mwute gburu mgbe ụgbọala on Dayton Street na Aurora on June 20, 2005. The abụọ Colorado State University na-agụsị akwụkwọ e echechiela site omempụ na-agbalị iji gbochie Javad si agba akaebe na ihe na-abịa igbu ọchụ ikpe (pịa ebe a na-agụ ozi ọma mkpuchi nke ahụ merenụ).
Na Sọnde, March 1, 2015, na Dayton Street Opportunity Center eze meghere ibo ụzọ ya na ihe mgbaru ọsọ nke na-egbochi ọdachi dị ka nke na-ekwu na ndụ nke Javad Marshall-Fields na Vivian Wolfe na otu uzo fọrọ nke nta 10 afọ tupu.
N'oge ikpe Javad na Vivian e gburu ya, e kpughere na perpetrators kwụsịworo ịga ụlọ akwụkwọ dị elu, e abụọ ma ọ bụ atọ na ọgbọ ndị òtù ezinụlọ na-tụkpuo, anaghịkwa ohere na ha obodo. Ihe mgbaru ọsọ nke Dayton Street Opportunity Center bụ iji belata ihe ndị dị ka ndị a na ike ọzọ ohere maka ndị ntorobịa, ezinụlọ, na ụmụ Aurora onye nwere ike n'ụzọ na-atụgharị a ndụ ime mpụ.
-Eso ha ọnwụ, ndị nne na nke Javad na Vivian - Rhonda Fields na Christine Wolfe - zutere na Fields 'home na-atụle ha na-akọrọ chọghị ime ka aja onwe, mmadụ ikpe ziri ezi, na mmụta a obodo mkpa. Ha kere Fields Wolfe Memorial Fund iji hụ ụmụ ya niile si afọ efu ka 24 nwere a ngosi, mma, ike, isi bido ime ihe ịga nke ọma Itie ịghọ okenye. Ubi ka ebe kere abụghị uru Fields Foundation efehe aka-eje ozi na Colorado State ulo nzuko omeiwunta dị ka Nnọchiteanya House District 42.
na 2012, ná mgbalị iji nye aka na ohere Aurora ụmụ na-eto eto, na Fields Foundation malitere n'oru oru na obodo mmekọ ilebara ndị na-adụ elekọta mmadụ na gburugburu ebe obibi pụrụ ịkpata ọrịa na-eme ka Aurora ụmụ ọgụ na mgba n'ụlọ akwụkwọ na-arụ adịghị mma, ize ndụ agwa. Nke a mgbalị mere ka e nke Dayton Street Opportunity Center nke eze meghere on March 1, 2015.